Unemployment ( shaqo la,aan)
Started by wanleweyn, 20 May 2017
Waxaa lagu cabiraa baaga muundada ama shaqo la,aan tawaqtigaan la joogo waa dhibaatooyiinka ugu dhibka badan ama ugu khatarsan waxayna ku faafatay qoysas badan iyo afraad kala duwan.
Shaqo la,aanta ayaa waxay tahay mid si isku mid ah usoo food saartay ama soo wajahday dowlado fara badan oo caalamka ka mid ah.
Shaqo la,aanta ma ahan mid sahlan oo waa ay dhibaato badan tahay waxayna iska horkeentaa xukuumada iyo shacabka hadii aysan xal u keenin dowlada markaas dalka maamusho.
Hadaba baxda aflixi waxay idin soo gudbineysaa sababaha keena shaqo la,aanta .
Shaqo la,aanta waxa keena waxaa ka mid ah siyaasada hadii ay dowlada dhacdo oo burburtay waxaa ka dhalanaayo dhibaatooyiin ah shaqo la,aan waayo xukuumada waxa u shaqeeya dadyow fara badan oo noloshooda iyo mida qoyskooda intba ku maareeyo mana ahan arin sahlan dhibatada ugu weyn oo shaqo la,aanta waa meesha ay ka dhalato.
Dowladda waa mida kaliya ay xakameyso shaqo la,aanta wadanka waxayna ka mid tahay waxybaaha dowlada xakameyso islamarkaana aysan dhicin shaqo la,aanta.
1.hoos u dhaca lacagta wadanka islamarkaana ay noqoto mid hooseysa.
2.in uu dhaco ama ku faafo bulshada dhexdeeda dagaal ahli ah.
3.in la waayo maalgashiga wadanka maadaama wadanka uu dagaal sokeeya ka jiro.
Asbaab dhaqaale ah
Shaqo la,aanta waxaa sidoo kale keena dhaqaale la,aanta wadanka ka jirto tusaale wadankii ayaa la ahayn waxsoosaar haba yaraatee taasina waxay sabab u tahay dhaqaale xumada wadanka ka jirto in sidoo kale wadanka shaqo la,aan ku baahda.
In shaqaalaha ay bataan shaqooyiinkana lasoo bandhigana aad u yaryihiin waxay qeyb ka tahay shaqo la,aanta .
in shaqaale laga dalbado wadamada bananka ayagoo wadanka joogo dad shaqadaas kuu qaban karo taasina waxay ka mid tahay shaqo la,aanta dhaqaale.
Asbaabta bulshada ee shaqo la,aanta waa mid ku xiran bulshada waxay ka saamaynaysaa dhan walbo sida siyaasada,dhaqaalaha waxaana ugu waaweyn.
· In dhaqaalaha kor u kaco islamarkaana saameeyo dadka aan waxba haysanin.
· In la waayo dad hormariyo wax soo saarka waddanka.
· In ay kororto dhalinyarada waxbaraty awoodana in shaqada qaban karanaa hadana wax shaqo ah aysan jirin islamrkaana dareemaayo quursi iyo niyad jab.
· In la waayo fikrado cusub oo shaqo lagu abuuran karo.
Xalka lagu yareyn karo shaqo la,aanta
Baxda aflixi waxay idin soo gudbineysaa xal macquul ah oo lagu xalin karo shaqo la,aanta hadii aad tahay qof shaqo la,aan ah waxaan rajaynaynaa in aad qaadan doontid xalka uu kuu soo gudbin doona aflixi.
1.in aad badashid fikrada ah in aad ku dhamaysatid waqtigaada shaqaalanimo taasina waxay gacan wayn ka geysanaysaa in ay bataan dadka aan shaqaynin ama shaqo la,aanta ah.
2.in aad samayasatid maalgasho yar yar
3.in aad dhaqaalahaada aad xakamaysid hadii aad shaqeysid.
Go To Topic Listing Business Administration & Accountancy